सरकारी अस्पतालले नै पाउँदैनन् सरकारले तोकेको कोटा अनुसार अक्सिजन सिलिण्डर :: विवेक राई :: Setopati
सरकारी अस्पतालले नै पाउँदैनन् सरकारले तोकेको कोटा अनुसार अक्सिजन सिलिण्डर
टिचिङका निर्देशक काफ्ले भन्छन्- बढी अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई पनि 'हाइ-फ्लो' मा अक्सिजन दिन सकिएको छैन
काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा आइतबारसम्म ३ सय ७७ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। तीमध्ये अधिकांशलाई अक्सिजन चाहिएको छ।
अस्पतालका अनुसार भर्ना भएको ती संक्रमितका लागि दैनिक ३ सय अक्सिजन सिलिण्डर आवश्यक पर्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि टिचिङलाई दैनिक ३ सय अक्सिजन सिलिण्डरको कोटा तोकेको छ। तर मन्त्रालयले तोके अनुसार अस्पतालले अक्सिजन सिलिण्डर पाएको छैन।
'हामीलाई दैनिक ३ सय अक्सिजन सिलिण्डर चाहिन्छ तर अस्ति ५० वटा मात्र पायौं। हिजो पनि १ सय १० वटा मात्र आयो, अब आज कति आउने हो,' अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले सेतोपाटीसँग भने।
पछिल्लो समय अक्सिजनको हाहाकार हुन थालेपछि मन्त्रालयले उद्योगीहरूलाई सरकारी अस्पतालहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अक्सिजन सिलिण्डर वितरण गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो। तर उत्पादन नै कम हुँदा उद्योगहरूले अस्पतालहरूलाई माग अनुसार अक्सिजन सिलिण्डर दिन सकेको छैन।
आवश्यक अक्सिजन सिलिण्डर नपाएपछि अस्पतालहरूलाई भर्ना भएका संक्रमितको उपचार गर्न पनि समस्या परेको छ।
'बाध्य भएर अक्सिजन 'लो प्रेसर' मा चलाइराख्नु परेको छ। बढी अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई पनि 'हाइ फ्लो' मा अक्सिजन दिन सकिएको छैन,' निर्देशक काफ्लेले भने, 'त्यसरी गर्दा जोखिम हुन्छ तर अहिलेसम्म डाक्टरहरूले बिरामीको अवस्था हेरेर कसलाई बढी दिने र कसलाई कम दिने गरिरहनुभएको छ।'
उनले अक्सिजनको आपूर्ति नभएकै कारण तयारी अवस्थामा रहेका बेड पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको सुनाए।
अहिले अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटरसहितको ४० वटा बेड तयारी अवस्थामा छ। अक्सिजन उपलब्ध भए ती बेड तुरून्तै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने काफ्ले बताउँछन्।
उनले अक्सिजन अभावको समस्या हल गर्नका लागि लिक्विड अक्सिजन ट्यांक जोड्ने भनिए पनि त्यो अहिलेसम्म तयार नभएको बताए।
उनले लिक्विड ट्यांक सञ्चालनमा ल्याउन सके कम्तीमा थप सय वटा बेड थप्न सकिने जनाए। तर लिक्विड ट्यांक जोड्ने जिम्मा पाएको शंकर ग्यास उद्योगले ट्यांक जोड्न सकेको छैन।
निर्देशक काफ्ले भन्छन्, 'यदि अक्सिजन हुने भए हामी 'मास' मा उपचार गर्न सक्छौं। सबै जनशक्ति पनि हाम्रैमा बढी छ। डाक्टरहरू बढी छन्। श्वासप्रश्वाससम्बन्धी धेरै डाक्टर पनि यहीँ छन्।'
ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको कोटा अनुसार अक्सिजन सिलिण्डर पाएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाटन अस्पताललाई दैनिक ३ सय अक्सिजन सिलिण्डरको कोटा तोकेको छ। तर अस्पतालले दैनिक २ सय देखि २ सय ५० वटामात्र अक्सिजन सिलिण्डर पाएको छ।
अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले भने, 'न्यूनतम ३ सयदेखि ३ सय ५० वटा अक्सिजन सिलिण्डर चाहिन्छ। तर मुस्किलले २ सयदेखि २ सय ५० वटा सिलिण्डर पाइन्छ। बीचमा त्यो पनि नदिएर हाहाकार नै भएको थियो।'
उनले अहिले अस्पतालमा ३ सय बिरामी भर्ना गर्ने क्षमता भए पनि अक्सिजन नहुँदा करिब २ सय जनामात्र भर्ना गर्न सकिएको जनाए।
निर्देशक काफ्लेले दैनिक ५ सय अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध भए 'नन कोभिड' सेवालाई पनि सञ्चालन गर्दै ३ सय ५० जना कोभिड बिरामीको उपचार गर्न सकिने बताए। तर अक्सिजन अभावका कारण अस्पतालको क्षमता अनुसार बिरामी भर्ना गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
निर्देशक काफ्लेले अक्सिजन अभाव भएकै कारण दुई सयदेखि माथि नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिएको बताउँदै त्यहीँ दुई सय जना भित्र कोही डिस्चार्ज भए वा खाली भएमात्र नयाँ बिरामीलाई भर्ना गर्ने गरिएको बताए।
उपत्यकाकै १० वटाभन्दा बढी निजी अस्पतालले सरकारले कोटा अनुसार दिएको अक्सिजनले नपुग्ने भन्दै बिरामीको उपचार गर्न नसकिने भन्दै हात उठाइसकेका छन्।
पछिल्लो समय अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेपछि सरकारले अक्सिजन वितरणमा कोटा प्रणाली तोकेको हो। तर कोटा प्रणालीलाई नै व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले धेरै समस्या भएको अस्पताल र उद्योगहरूले गुनासो गरेका थिए।
सुरूमा अक्सिजन वितरणको जिम्मा 'कोभिड-१९ जोखिम व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र' सिसिएमसीले लिएको थियो। तर त्यसको दुई चार दिनमै वितरण प्रणाली नै थप झन्झटिलो भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले वितरणको जिम्मा लिएको हो।
अहिले मन्त्रालयले दुइटा टिम गठन गरी अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गरिरहेको छ। तर अझै पनि अस्पतालहरूले कोटा अनुसार अक्सिजन सिलिण्डर नपाएको र त्यसले उपचारमा बाधा पुगेको बताएका छन्।
सरकारले भने अहिलेको विद्यमान अक्सिजन अभावको समस्यालाई हल गर्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन।
केही दिनअघि मात्र अस्पतालहरूले अक्सिजनको हारगुहार गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सय बेड माथिका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई १५ दिनभित्र आफैं अक्सिजन प्लान्ट तयार पार्नू भनेर निर्देशन दिएको थियो। तर जवाफमा ती अस्पतालहरूले १५ दिनभित्र प्लान्ट जडान गर्न नसकिने भन्दै सरकारले हावादारी निर्णय गरेको बताएका थिए।
अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले समेत आफ्नो उत्पादन क्षमता नै कम भएकाले यो समस्या आइपरेको बताएका छन्। अहिले उद्योगहरू चौबिसै घण्टा चलाउँदा पनि माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा लिक्विड अक्सिजन नै जुटाउनतिर सरकारको ध्यान हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २, २०७८, ०६:२९:००